AKON’NY TONDRA-DRANO – Hanome fanampiana ireo traboina ny Fanjakana Indianina
AKON’NY TONDRADRANO – Hanome fanampiana ireo traboina ny Fanjakana Indianina
Publié janvier 31, 2020 par Book News
Hitondra ny anjara birikiny amin’ny fanampiana ireo traboina vokatry ny todra-drano ny Fanjakana Indiana.
Sambo iray no mitondra ireo fanampiana
«Vao nahare izahay ny voina nihatra tamin’i Madagasikara dia nandray fepetra avy hatrany ka ny sambon’ny tafika an-dranomasina indianina izay saika nalendeha tany Seychelles no nasaina nankaty Madagasikara hitondra ny fanampiana ho an’ireo traboina »,
hoy ny Ambasadaorin’i Inde eto Madagasikara.
Tonga tao Antsiranana ny alakamisy maraina teo ny sambon’ny tafika Indianina. Sambo izay hitondra fitaovana hanampiana ireo traboina vokatry ny todradrano teto Madagasikara.
?Ny masoivohon’i Inde eto Madagasikara sy ny mpandika teniny nandritra ny kaoferansa notontosaina ny alakamisy lasa teo. cc : Toria
« Io sambo io dia mitondra vary, fanafody, lamba … mba hoan’ireo traboina ireo. Mety ny anio alakamisy na rahampitso zoma no hozaraina amin’ny toerana izay tena voakasik’izany voina izany ireo fitaovana ireo »,
araka ny fanazavan’ny Masoivon’i Inde eto Madagasikara.
Hisy ireo ekipa medikaly efa vonona hijery ny fahasalaman’ireo traboina. Hitondra rano fisotro koa izy ireo ho zaraina amin’ireo traboina. Hiara-hiasa amin’ny BNGRC izy ireo amin’ny fizarana ny fanampiana any an-toerana.
« Ampy tsara ho an’ireo traboina ny vary izay omena »,
hoy hatrany ny Masoivohon’i Inde nandritra ny lahateniny.
Fiaraha-miasa maro ho fanantanterahana ny vina “Emérgence de Madagascar”
Sehatra maro no hiarahan’ny Fanjakana Malagasy sy ny Firenena Indianina miasa. Anisany hiarahana’ny Governemanta Indianina miasa amin’i Madagasikara ny sehatry ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fambolena, ny kolotoraly… mba ahafahana manampy Governemanta Malagasy amin’ny fanatanterahana ny vina « émergence de Madagascar».
Raha eo amin’ny fahasalamana ohatra dia misy ny fitaovana natao hitiliana sy hitsaboana ny aretina homamiadana izay napetraka ao amin’ny Hopitaly HJRA. Efa mandeha tsara izany fitaovana izany amin’izao ary hotokanana miaraka amin’ny Fanjakana Malagasy tsy ho ela.
Raha eo amin’ny fambolena kosa dia efa nanome fanampiana mitentina 80 Tapitrisa Dolara ho an’i Madagasikara ny Fanjakana Indianina ho fanatsarana ny vokatry ny fambolem-bary amin’ny faritra maro eto Madagasikara.
Raha eo amin’ny sehatra ara-barotra kosa dia efa mahatratra 500 Tapitrisa dolara amin’izao ny fifanakalozana ara-barotra eo amin’i Madagasikara sy Inde. Manantena ny Fanjakana Indianina fa ahatratra 1 miliara Dolara izany fifanakalozana ara-barotra eo amin’ny roa tonta izany tsy ho ela.
Ankoatra izay dia hanao sonia ny fifanarahana momban’ny Oniversité “en ligne” eto Madagasikara izay ahazoana diploma indiana ny Firenena roa tonta. Mbola maro ihany koa ny fifanarahana ho ataon’i Madagasikara sy i Inde ho fanamafisana izany fiarahamiasa izany.